Soo dejisan Clash of Clans 13.369.9 – Vessoft
AndroidMadadaaloCiyaarahaClash of Clans
Bogga rasmiga ah: Clash of Clans
Mashruucan ee Qabiiladu – ciyaar caan ah ku sifayn uu qorshahan si ay u dhisaan kuu gaar ah dejinta iyo horumarinta qabiilka. Ciyaarta oo aad u baahan tahay si loo ballaariyo iyo aad u hagaajiso dejinta iyo kordhiyo hubka ee ilaalinta dhanka ah cadowga. Mashruucan ee Qabiiladu u saamaxaaya in ay qortaan ciidankii reer Barbariyiinta, ciidamada, iyo saaxiriinta, dawacooyin oo dagaalyahan kale oo awood leh. Kulankaan ayaa kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan qabiilkaaga, waxaa horumarinta, ilaalinta iyo weeraraan ah qabaa’ilka kale. Mashruucan ee Qabiiladu waxa ku jira qayb dhaqaale, kuwaas oo aad u baahan tahay in la qaybiyo khayraadka la heli karo horumar iyo ilaalinta degsiimooyinka cadaawayaashiisa.
Ciyaar xiiso leh oo ay ku sifayn ee istiraatiijiyadda
Storyline Farxad leh
Battle leh ciyaaryahano adduunka oo dhan
La dagaallama ka dhanka ah cawogudda
Soo dejisan Clash of Clans
Faallo ku saabsan Clash of Clans
Clash of Clans Xirfadaha la xiriira